फिल्मी खबर - साप्ताहिक
चलचित्र विकास वोर्डको कुर्चीमा पुग्ने बेला अध्यक्ष केशव भट्टराइले भनेका थिए, – राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार जसरी पनि आयोजना हुन्छ । तर, बोर्डको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ यस पटक पनि नहुने भएको छ । वोर्डले स्थापना दिवसको विषयमा हालै जारी गरेको विज्ञप्तीमा उक्त कुरा उल्लेख छैन । पुरा पढ्नुहोस्
रोहित अधिकारीले निर्माण गर्दै गरेको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को अहिले सिन्धुलिमा छायांकन भैरहेको छ । अभिनेत्रीका रुपमा केकी अधिकारीलाई अनुबन्ध गरेर फ्लोरमा गएको यो चलचित्रमा अर्की अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टको इन्ट्री भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
कार्तिक ८ गतेका लागि रिलिज मिति तय गर्दै चलचित्र ‘पोई पर्‍यो काले’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ । चलचित्रमा काले पोईको भूमिकामा सौगात मल्ल प्रस्तुत हुने भएका छन् । यो चलचित्रमा सौगात मल्ल र सृष्टी श्रेष्ठ जोडीका रुपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ ३, २०७६
डीएस डिजिटलको ब्यानरमा बनेको चलचित्र घरको फस्टलुक पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । पोष्टरमा सुरक्षा पन्तको डरलाग्दो रुपलाई देखाइएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख ३१, २०७६
आगामी जेठ ३ मा प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्रका निर्देशक हुन्, मिलन चाम्स । यसअघि धेरै सफल चलचित्र दिइसकेका कारण चाम्स नेपाली चलचित्रका बलिया खम्बा बनेका छन् । बेला–बेलामा खरो बोलेर मिडियामा छाउने निर्देशक चाम्सले नेपाली चलचित्र र चलचिचत्रकर्मीहरुबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै चलचित्र फ्लप भैरहेको बताएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सुशील श्रेष्ठको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्र लभ डायरिजको फर्स्टलूक पोस्टर र रिलिज डेट सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा अभिनेत्री रुबीना थापासँग सुशील रोमान्टिक अवतारमा देखिएका छन् । यो चलचित्रबाट रुबीना र विश्वजित रिमालले डेव्यु गर्दैछन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र ‘आमा’ नाम सापटी लिएर तेस्रो पटक ‘आमा’ चलचित्र निर्माण हुने भएको छ । यो नाममा हीरासिंह खत्रीले वि.सं. २०२० मा चलचित्र बनाएका थिए । यसपछि २०५१ सालमा रेसराज आचार्यले पनि ‘आमा’ नाममा चलचित्र बनाए । अब तेस्रो पटक निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले ‘आमा’ बनाउन लागेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
केहि समय अघि निर्माण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ । यो चलचित्रमा कलाकार दीपकराज गिरी र अभिनेत्री केकी अधिकारीले जोडीका रुपमा शिर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गर्ने भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्